Gudiga ansixinta golaha degaanka oo dhaariyey 27 xildhibaan,shaaciyeyna xilliga doorashadda Duqa Garowe . • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Gudiga ansixinta golaha degaanka oo dhaariyey 27 xildhibaan,shaaciyeyna xilliga doorashadda Duqa Garowe .
Gudiga ansixinta golaha degaanka oo dhaariyey 27 xildhibaan,shaaciyeyna xilliga doorashadda Duqa Garowe .
August 28, 2018 - By: Mohamed Dahir
Garowe (HM):- Gudiga xalinta Khilaafka xulista Xubnaha Golaha degaanka degmada Garoowe ayaa shaaciyey xiliga doorashada Duqa & kuxigeenkiisa magaaladda Garoowe ee Xarunta Dowladda Puntland,Xubnaha oo horey loosoo gudbiyey 17 kamid ah ayaa 10ka dhimanana manta lasoo gaarsiiyey gudiga.
Xarunta wasaaradda Arrimaha Gudaha,dowlaha hoose iyo horumarinta reer guuraaga ayaa lagu qabtay munasabad lagu dhaarinayo 27ka xildhibaan ee noqonaya golaha deegaanka degmadda Garoowe,waxaana goobta gudigu kaga dhawaqay dhaarin kadib in doorashada Duqa Magaaladda & kuxigeenkiisu dhacayso Subaxnimadda Arbacadda oo bari ah.
Xubnaha odayaasha Nugaal soo gudbiyeen ee golaha degaanka oo 27 ah waxaa haween ka ah 2xildhibaan,waxaana halkaa laga dareemayaa in isjiid-jiid badan ka gadaal aanay Nabadoonadu qorshaha ku darsan saami siinta haweenka oo kaalin mugle kaga jira horumarka adeegyadda bulshadda.
Halkaan ka eeg Liiska 10ka xubnood ee dhimanaa.
Dowladda Puntland Oo Sheegtay In Sharci ay ku Xiran Yihiin Xubnihii Gudiga Horumarinta Bosaso-DAAWO
July 22, 2019 By Abdirisak Faamoos
Muxuu Gudoomiye Mursal kala hadlay Gudigii Sharciga doorashooyinka ee uu Dhawaan Magacaabay
Gudiyada Joogta ah ee Labada Aqal BFS oo Markii Ugu Horeysay Kulmay Khilaafkoodii Kadib-Sawiro
Hay’addo KAALO Oo Bosaso ku qabatay tababar Wacyigelin ah-Sawiro
Xildhibaano Sharci darro ku Tilmaamay Xariga Loo Gaystay Xubnaha Guddiga Hormarinta Bosaso [DAAWO/SAWIRRO]
July 22, 2019 By Omar Akhyaar